जाने होईन त माल्टा,तलब २ लाख ८२ हजा;रसम्म,सेवा शूल्क ४० हजार मात्रै। प्रक्रिया धेरै सजिलो – List Khabar
Home / समाचार / जाने होईन त माल्टा,तलब २ लाख ८२ हजा;रसम्म,सेवा शूल्क ४० हजार मात्रै। प्रक्रिया धेरै सजिलो
जाने होईन त माल्टा,तलब २ लाख ८२ हजा;रसम्म,सेवा शूल्क ४० हजार मात्रै। प्रक्रिया धेरै सजिलो
admin October 12, 2021 समाचार Leaveacomment 117 Views
वै’देशिक रोजगारीको लागि माल्टाबाट नेपाली श्रमिकको लागि माग आएको छ ।माल्टाको इस्टन कन्सल्टेन्सी सर्भिस कम्पनीले विभिन्न १२ पदका लागि ५८ जना नेपाली श्रमिकको माग गरेको छ ।नेपालको इन्टरनेशनल प्रा. लिले वैदेशिक रोजगार कार्यालय ता’हाचलबाट माल्टाको डिमाण्ड पुर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन गरेको हो ।
सेक्युरिटी गार्ड, वार टेन्डर, पिज्जा मेकर, वेटर, किचन हेल्पर, केयर गिभर लगायत विभिन्न १२ पदका लागि श्रमिकको माग गरिएको छ।खाने बस्ने सुविधा सहित काम अनुसार न्यूनतम मा’सिक तलब १ लाख ३४ हजार देखि अधिकतम २ लाख ८२ हजार सम्म तो’किएको छ ।ओभर टाईम सुविधा, वार्षिक बिदा कम्पनीको निय’मानुसार हुने जनाइको छ।
यो पनि:स्पेनमा एक गो’री महिलाले कालो बच्चा लाई जन्म दिएपछि आफ्ना श्रीमानलाई अनौठो आ’रोप लगाइन् ।पति पत्नीमा निकै हार्दिकता थियो । तर जव महिला सुत्केरी भइन् सबै माहौल एकाएक परिवर्तन भयो । उनले बच्चा देखेपछि कसैले नसोचेको आ’रो’प पतिलाई लगाइन् ।
आफुले कालो वर्णको बच्चा जन्माएपछि ति महिलाले श्रीमानलाई अरु कुनै कालो वर्णको महिलासंग सम्पर्क राखेको आरोप लगाएकी छन्।यो घट’ना जामोरा (सपेन) को अस्पतालमा केही समय अघि सम्म सबै ठिक थियो ।
एकै छिनमा अस्पतालमा हल-चल भयो । महिलाले जन्म दिएको बच्चा गोरो थिएन । त्यो कालो रङ्गको थियो । यस्तो थाहा पाएपछि महिला आफ्ना पति’सङ्ग रिसा’इन ।
Previous घरमा बेला-बेलामा माउसुली देखिए ? हुनसक्छ यस्तो कुराको संकेत
Next बानेश्वरको आकाशे पुलमा चढेर युवकले …..